» उपत्यकामा थपिन सक्छ निषेधाज्ञा
काठमाडौं । कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको एक महिना पुगेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर जेठ अन्तिमसम्म निषेधाज्ञा थप्ने तयारीमा अधिकारीहरू लागेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वैशाख १६ देखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् । सो अवधिमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको भन्दै करिब ३३ हजार सवारी साधन र एक हजार आठ सय जनालाई ‘होल्ड’ गरिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक र अन्य गरी करिब पाँच हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । उपत्यका प्रवेशको सात नाकासहित पाँच सय स्थानमा नियमित जाँच चौकी स्थापना गरिएको छ ।
तर, पछिल्लो पटक कोभिड-१९ सङ्क्रमण व्यवस्था अध्यादेश जारीपछि जरिवाना तथा कैद सजायको तयारी गरिएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले पहिलो तीन हप्ताको निषेधाज्ञामा कोरोना सङ्क्रमण नघटेपछि चौथो पटक थप कडाइ गरिएको स्पष्ट पारे । अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा थपिन सक्ने उनले बताए । गोरखापत्र दैनिकमा देवबहादुर कुँवरले लेखेका छन ।
आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो, के-के खोल्न पाइने, के नपाइने ? (सूचीसहित)
काठमाडौ उपत्यकामा १ साता निषेधाज्ञा थप, मोडालिटी भने परिवर्तन
असार १ देखि निषेधाज्ञा के हुन्छ ? उपत्यकाका सीडीओहरु छलफल गर्दै